Tägliches Splinterlands update 06.07.2022Tägliches Splinterlands update von kryptofire Tägliche Belohnung aus Liga Gold3Datum 06.07.2022 Täglicher Fokus: Wasser DEC Gewinn Täglicher sps airtrop Tägliche einnahmen: 15,236sps Risingstar-Game
မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင် ဖြစ်မလာဒီနေ့ကတော့ ကံမကောင်းတဲ့နေ့လို့ပြောရမလား အစကတည်းက အခက်အခဲဖြစ်နေတော့ သွားရလာရတာအခက်အခဲရှိလို့လာမသိဘူး။အခုတော့ လမ်းဘေးမှာအိပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ရပြီးပေါ့။ ငါးအိုးကိုမနက်၅နာရီ
Now Sold Outရင်ထဲက အလုံးကြီး တလုံးတော့ ကျသွားခဲ့ပြီ။ တခြား မဟုတ် ကျနော့် စာရေးခုံတွေ ရောင်းထွက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်၏။ လုပ်ထားပြီး မသုံးဖြစ် နှစ်အတော်ကြာမှပဲ ရောင်းထွက် သွားခဲ့၏။ ထို ခုံတွေ စလုပ်တုန်းက အချိန်တွေ
သူ့အကြောင်းတရားနှင့် သူယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက် အနောက်ဖက်ရှိ ကျုးအိမ်များဖယ်ရှားခြင်း ခံရပြန်သည်။ ဖယ်ရှားခြင်း ခံရပြန်ပြီဟု ရေးရသည်မှာ ယခင် ငါးလကျော်ခန့်ကလည်း တခါဖျက်ခံ ရသည်။ ဖျက်ခံရပါသော်လည်း တပတ်လောက် လောက်အကြာမှာ ထိုနေရာများသို့
Rabona Official10 hours
Season EndHello Managers There was nothing to upgrade because all of the stadium facilities are under upgrading time. Yesterday I upgrade four parts of Stadium facilities. After two days I will upgrade other Stadium
Mi reporte de Actifict: julio52022My report Good evening Freaks of #actifit and #hive Today I don't have much time because I only share my daily report for the #POLIAC tournament. Buenas noches Freaks de #actifit y #hive. El dia de hoy
ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းဖို့ သစ်ပင်စိုက်ကြစို့။ #nature #hivelist #neoxian ...ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းဖို့ သစ်ပင်စိုက်ကြစို့။ #nature #hivelist #neoxian #archon #creativecoin #proofofbrain #trafficinsider
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY #45Rules to follow in this Black & White photography challenge: Black and white images that represent any positive meaning in life. Present one or two image every day. You may add people, if you want.